Nzuzo Nzuzo: Peter Pan Neverland
Home » Na-agbasa News Travel » Nzuzo Nzuzo: Peter Pan Neverland
An Ndị njem nleta na onye edemede njem hụrụ Peter Pan Neverland. Achọ a nzuzo ụzọ mgbapụ?
Kwaghị agaba Park Disney chọta Peter Pan Neverland. Obere agwaetiti na-ekpo ọkụ na Oke Osimiri Indian nwere ike ịbụ ihe mmụọ nsọ nye Peter Pan's Neverland, ihe akaebe ọhụụ na-egosi, na myirịta dị n'etiti ụwa na-eche n'echiche na Boulder Island na Mergui Archipelago.
Obere agwaetiti na-ekpo ọkụ na Oke Osimiri Indian nwere ike ịbụ ihe mkpali nye akụkọ mgbe ochie nke Peter Pan, ihe akaebe ọhụụ na-atụ aro. Ndi oru nyocha achotawo otutu ihe di nkenke n’etiti ihe omuma nke onye edemede JM Barrie kere na agwaetiti di omimi nke n’enweghi uzo n’ime Osimiri Andaman nke anakpo Boulder Island.
Nchọpụta ahụ emeela ka ndị mmadụ na-akọ akụkọ banyere mmalite nke Neverland site na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme, ndị na-eme map, ndị ọkachamara na ndị edemede na ndị njem njem. Na-ekwu na ọpụpụ ahụ, nke nwere oke ohia nwere ike imetụta onye edemede Barrie na-akwado ọtụtụ njikọ dị egwu, onye edemede njem njem Keith Lyons, onye na-enyocha ikpe ahụ kemgbe etiti 2018.
"Ọ bụ ezie na onye edemede na onye edemede egwuregwu nke Scottish ahụtụbeghị India ma ọ bụ Asia n'onwe ya, enwere ọtụtụ njikọ dabara na nke na-egosi na onye edemede Peter Pan maara banyere agwaetiti ahụ, nke bụbu akụkụ nke Britain Burma colonial."
Ebumnuche nke ịchọta ụwa nke Neverland nke Peter Pan, Wendy, the Lost Boys na Tinkerbell bụ ihe kpatara afọ abụọ gara aga mgbe ihe osise oge ochie nke Neverland jikọtara ya na onyogho satịlaịtị nke Boulder Island na Mergui Archipelago nke dị n'ụsọ oké osimiri Myanmar. Otu ụgbọ mmiri na onye njem njem Bjorn Burchard nke Moby Dick Tours kwuru, sị: "Ozugbo m hụrụ maapụ ahụ tụrụ m n'anya etu o siri yie Boulder Island na Mergui Archipelago," "Ọ bụ ihe ịtụnanya etu ha si yie, nwere otu akụkụ osimiri, bays, ụsọ mmiri, oke ọhịa, ọdọ mmiri, agwaetiti na okwute."
Ọtụtụ ndị ọkachamara egosila na anwansi ahụ nke agwaetiti ahụ, gụnyere onye bụbu onye na-ese foto na onye nyocha Indian Army. A na-akpọ ájá ọcha, agwaetiti coral aha na 19th narị afọ nke 1940 site n'aka onye na-ede akwụkwọ mmiri na mmiri bụ Scott Horsburgh. Mergui Archipelago jere ozi dị ka ebe ezumike na-enweghị nlekọta maka ndị Briten zigara Burma, na-arụ ọrụ nke Neverland dị ka ebe nwata ebighi ebi, mgbapụ, na anwụghị anwụ. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na XNUMXs, otu agwaetiti ahụ enweghị oke maka mmadụ niile n'ihi ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke agha.
Ọ bụ nanị n’afọ iri gara aga ka a na-ekwe ka ndị si mba ọzọ banye n’agwaetiti nke agwaetiti 800 ndị na-ebighị, nke gafere Myanmar na ndịda Thailand. Ulo obere ndu-nchekwa Boulder Bay Eco Resort mepere n'oge na-adịbeghị anya.
Horsburgh Island, nke nwere ọdịdị pụrụ iche, gosipụtara nke ọma na eserese mmiri na eserese na mbụ n'ihi ọnọdụ ya dị na nsọtụ mpụga agwaetiti coral na-aghọ aghụghọ. "Barrie gaara amatala ihe Horsburgh rụzuru maka ụlọ ọrụ East India, yana n'ịmepụta agwaetiti, ikekwe o jiri agwaetiti ahụ gbara ajụjụ ọnụ wee kpọọ aha ya maka mmụọ nsọ ya," Burchard na-ekwu.
Onye bu onye agha Indian na-ese ihe na onye nyocha, Col Sanjay Mohan, nke Map & Locations, onye nyochaworo map nke agwaetiti a na-eche n'echiche na ihe oyiyi satịlaịtị nke Boulder Island, na-ekwu na mgbagwoju anya nke ebe Neverland na mmalite ya na-ekpughe ọtụtụ ihe banyere ọrụ nke echiche na akụkọ na okike map. "N'oge gara aga, ndị na-ese ihe sitere na akụkọ ndị ọbịa wepụtara ụfọdụ akụkọ ihe mere eme akụkọ, na-egosi na iche n'echiche na akụkọ ifo abụwo akụkụ dị mkpa nke eserese. Nnọkọ nke ezigbo agwaetiti n'Oké Osimiri Andaman na nke Peter Pan's Neverland nwere ike bụrụ ihe ndabakọ, ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ n'ihi na onye mere map ahụ si n'ike mmụọ nsọ ma ọ bụ eserese nke agwaetiti Boulder kpalie ya. ”
Lyons na-ekwu na e nwere ihe karịrị myirịta na ọdịdị nke agwaetiti Boulder na ngosipụta mbụ nke Neverland. “Ọ bụghị naanị na agwaetiti ahụ yitụrụ nke ukwuu, ebe agwaetiti a dị, aha mbụ ya, na ọnụnọ ndị ohi, ndị India, agụ iyi - na ọbụna ndị ahịa ahịa - na-akwado echiche ahụ na Neverland abụghị naanị ebe tere aka, mebere ya , ”Ka Lyons na-ekwu. Ihe ọzọkwa bụ na e nwere ezigbo ndị Scottish na ndị edemede na Burma, Barrie na-emetụtakwa ọtụtụ ndị enyi ya na ndị ha na ya dịkọrọ ndụ bụ ndị biri ma ọ bụ gaa na Burma, gụnyere onye na-ede uri Rudyard Kipling nke nwere ike gafere agwaetiti ahụ.
Onye edemede njem na onye na-ese foto Dave Stamboulis, onye edemede nke 'Odysseus' Ikpeazụ guzoro ', bụ onye letara Boulder Island maka USA Today na-ekwu na enwere ụfọdụ àgwà Neverland banyere agwaetiti ahụ. “Enwere ọtụtụ ebe ị ga-agagharị, nọrọ naanị gị, ma n'ezie ọ nweghị onye ga-agwa gị ihe ị ga-eme ma ọ bụ ihe ị na-agaghị eme. Osimiri ndị mara mma magburu onwe ha na usoro nke ebe Robinson Crusoe paradise. Dị ka ọ dị na Neverland, ndị njem na-achọkarị ebe nrọ. Nrọ ndị a, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ echiche efu, na-agụnyekarị ebe ndị a na-enweghị atụ na ndị a na-emetụtaghị ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ụdị nke ha. Nkume dị nso n'ihi na emebibeghị ma ọ bụ mebie emebi ka ọtụtụ osimiri ndị dị na South East Asia nwere. "
"Ogologo aha Mergui Archipelago maka egwu ndị ohi na egwu mmiri ya na-agbakwunye na Boulder Island bụ ihe na-akpali maka Neverland," ka onye edemede njem njem Christopher Winnan, onye edemede nke 'Around the World in the XNUMX Documentaries' na-ekwu. Agụ iyi Saltwater bi na mpaghara ndị dị na mpaghara ahụ, a na-ahụkarị agwaetiti Ramree dị ka agwaetiti kachasị dị egwu na mbara ala, na-ejide ndekọ ụwa maka ọnwụ ọgụ nke agụ iyi, na iguanas buru ibu nke ha hiere ụzọ maka agụ iyi, e nwere ihe ndị ọzọ dị egwu dị na Oke Osimiri Andaman. .
“Amachaghị ihe banyere agwaetiti Mergui Archipelago dịpụrụ adịpụ, yabụ onye ga-asị na Boulder Island n'onwe ya nwere ike ọ gaghị ebi ọbụna karịa ndị bi na ya? Tinkerbell na Lost Boys nwere ike ọgaghị adị n'etiti osisi ukwu ahụ, mana clownfish na parrotfish ka na-egwu egwu ma na-achọ nkume coral. ”
Kedu ihe kpatara ndị Iran na ndị America ji bụrụ enyi karịa esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Ndị njem njem nlegharị anya nke Africa na-arịọ Iran na United States ngwa ngwa